သားသမီးတွေ ဆီက စားရတဲ့ ထမင်းတလုတ် နှင့် မိဘတွေရဲ့ဘ၀...! - Thadin
HomeKNOWLEDGEသားသမီးတွေ ဆီက စားရတဲ့ ထမင်းတလုတ် နှင့် မိဘတွေရဲ့ဘ၀…!
သားသမီးတွေ ဆီက စားရတဲ့ ထမင်းတလုတ် နှင့် မိဘတွေရဲ့ဘ၀…!
February 12, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on သားသမီးတွေ ဆီက စားရတဲ့ ထမင်းတလုတ် နှင့် မိဘတွေရဲ့ဘ၀…!
ညနေအလုပ်ကအပြန် အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ အမေနဲ့ဇနီးသည်ပြောနေတဲ့ စကားတွေကိုကြားနေရတယ်…
မိန်းမဖြစ်သူရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော် ဒေါသတွေဖြစ်မိတယ်
“မင်းကလဲကွာ အမေမှာ ဒီဟင်းတွေနဲ့ မတည့်ပါဘူး မစားနဲ့လို့ ဒေါက်တာက မှာထားတယ်လေ ဒီလောက်တော့ မင်းနားလည်ရမှာပေါ့”
“ဒီလောက်စားချင်နေရင် ရှင့်အမေကို ရှင်ကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးလိုက်……”
မိန်းမဖြစ်သူက မကျေမနပ်နဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီး တံခါးကိုဆောင့်ပိတ်လိုက်တယ် ဝုန်း…
ကျွန်တော်အမေဘက်ကို လှည့်ပြီးအမေကိုကြည့်လိုက်တော့ အမေရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်မှာ မျက်ရည်စတွေ တွဲခိုနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်……
“ရပါတယ် မေမေရယ် သားမပင်ပန်းပါဘူး မေမေကိုအခုခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲ ပြင်ပေးမယ်နော် ပြီးရင်သားပြောစရာရှိတယ်မေမေ သားခေါက်ဆွဲပြင်လိုက်မယ်နော်”
“ဒီလိုပါ အိမ်မှာနေရတာကလဲ အမေမှာအဆင်မပြေဘူးလေ ပြီးတော့ သားမိန်းမကလဲ အမေကိုဆိုအမြဲတမ်း အပြစ်ပြောနေတာ အမေလဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ် ဒီတော့အမေအဆင်ပြေအောင်သားစီစဉ်ထားတယ်”
အမေ့မှာပြောရင်း မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ် ငိုနေတဲ့ကြားကနေ မပီသတဲ့ စကားလေးတွေနဲ့အမေဆက်ပြောတယ်……
“သားပြောမှာကို အမေသိပါတယ် သားမေမေကို ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ ထားချင်တာမလား မေမေသဘောပေါက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့သားးးးးရယ်
အမေ့သားလေးကို အမေ့ကအခုချိန်ထိ မျက်စိအောက်က အပျောက်ခံခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးအမေ့မှာ မျက်စိတွေမမြင်နိုင်ရင်တောင်မှ အမေသားလေးရဲ့အသံလေးကိုတော့ ကြားချင်မိတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ သားအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့လဲ သားထားတဲ့နေရာလေးမှာ အမေသွားနေရမှာပေါ့ သားရယ်”
မေမေရဲ့စကားသံတွေကို နားထောင်ရင်း ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျခဲ့မိတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ဘာတက်နိုင်တော့မှာလဲ မိန်းမဖြစ်သူကလဲ အမေကိုပဲအမြဲတမ်း ပြဿနာရှာနေတာ ဟူးးးးးးး
မထူးတော့ပါဘူးလေ အမေ့ကို ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာပဲ လိုက်ပို့တော့မယ်……
“မငိုပါနဲ့တော့အမေရယ် အမေအဆင်ပြေအောင် သားအကောင်းဆုံး လုပ်ပေးမယ်နော် အမေကိုညနေကြရင် သားလိုက်ပို့မယ်နော် အမေပစ္စည်းတွေ စုံအောင်ထည့်ထားလိုက်ပေါ့ အခုသား ခေါက်ဆွဲပြင်လိုက်အုံမယ်နော်”
“မလုပ်ပါနဲ့တော့သားရယ် အမေမစားချင်တော့ပါဘူး သားလဲသွားနားတော့လေ အမေလဲရှိတဲ့ အဝတ်စားလေးတွေ ထည့်ထားလိုက်မယ်…”
အမေနားကနေ ကျွန်တော်ထွက်လာပြီး အခန်းပေါက်ဝရောက်လို့ အမေကိုလှည့် ကြည့်လိုက်တော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အမေကျွန်တော်ကို ကြည့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်
ခွင့်လွှတ်ပါ မေမေရယ်လို့ စိတ်ထဲနေ တောင်းပန်မိတယ်
ညနေလဲရောက်ရော ကျွန်တော်အခန်းထဲကထွက်လာတော့ အမေမှာ အဝတ်ဟောင်းလေး နှစ်စုံလောက်ကို ရင်ခွင်မှာပိုက်ပြီး စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်…
“ထည့်ပြီးပါပြီသားရယ် အမေမှာ ဘာမှထူးထူး ထွေထွေမရှိတာ”
အမေ့ကိုခေါ်ပြီး ဘိုးဘွားရိပ်သာကို လိုက်ပို့ဖို့ထွက်ခဲ့တယ် လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲ စကားတစ်ခွန်းမှမပြောခဲ့ကြဘူး အမေ့မှာတော့ ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ ရင်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ဒုက္ခတွေ များနေပါစေ အမေမျက်နှာမှာအပြုံး မပျက်ခဲ့ဘူး အမေဝမ်းနည်းနေမယ်ဆိုတာ သားသိပါတယ် အမေရယ်……
အမေဖြစ်သူမှာလဲ သားစိတ်ချမ်းသာဖို့တာ လိုက်လျှောခဲ့ရတာ ရင်ထဲမှာတော့ ကြေကွဲနေမိတာပေါ့ သားရယ်
လူတွေပြောပြောနေတဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာဆိုတာ အမေတို့လို လူတွေအတွက်တော့ ဒုက္ခသယ်စခန်းတစ်ခုပေါ့
ဘယ်မိဘမှ ကိုချစ်တဲ့ သားသမီးခွဲခွါချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်မွေးထားတာ သားသမီး ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ လာနေရတဲ့ အမေတို့လို လူတွေကို အမေသနားမိတယ်သားရယ်
ငါ့သား ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အမေတို့ကများ သားကိုမိဖမဲ့ကျောင်းမှာ ပို့ခဲ့ရင်ငါသားလေး ကြီးလာရင်အမေတို့ကို စိတ်ဆိုးမှာပဲနော်
မိဘရှိရဲ့သားနဲ့သားအရင်းတစ်ယောက်လုံးကို မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ပစ်ထား ရလားလို့ သားလေးတွေပြီး စိတ်နာနေမှာပေါ့ အခုလဲအမေတို့ အဖြစ်က အဲလိုပါပဲ
ကိုယ့်အသက်နဲ့ရင်းပြီး မွေးခဲ့ရတဲ့သားသမီးတွေ ရှိပေမဲ့လည်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ ဆိုတဲ့နေရာကို အမေ့သားလေးက လိုက်ပို့ခဲ့တယ်နော် အမေစိတ်မဆိုးပါဘူး သားရယ် အမေ့သားလေး စိတ်ချမ်းသာရင် အမေကျေနပ်ပါပြီသားရယ်…
အတွေးကိုယ်စီနဲ့ပဲ ဘိုးဘွားရိပ်သာထဲသုိ့ ဝင်လာခဲ့တယ်
အမေနေရမဲ့ အခန်းကိုလိုက်အပို့ ဧည့်ခန်းကိုဖြတ်အလျှောက် ကြည့်လိုက်တော့
tvကြည့်နေတဲ့သူတွေရယ် အားငယ်စွာနဲ့ ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေရယ်
တစ်ယောက်မှ ရည်မောပျော်ရွှင်တာကို မတွေ့ရဘူး အမေနေမဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ နေရာတကျစီစဉ်ပေးပြီး ကျွန်တော်ပြန်ဖို့အတွက် အမေ့ကိုနူတ်ဆက်လိုက်တယ်
“အမေ သားသွားတော့မယ်နော် အမေဘာပဲလိုလို သားဆီကိုအကြောင်းကြားနော် သားလဲ မကြာခဏလာပါ့မယ်”
အမေကိုခေါင်းလေးငြိမ့်ပြပြီး ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ် အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ မိန်းမဖြစ်သူနဲ့ သူ့အမေနဲ့က ကျွန်တော်အမေနေတဲ့ အခန်းလေးကို အကုန်ရှင်းနေတယ် အမေပစ္စည်းမှန်သမျှ အမှိုက်ပုံးထဲ ထည့်နေတယ်
“ဒါကဘာဖြစ်တာလဲ ဘာလုပ်တာလဲလို့ ငါမေးနေတယ်လေ”
“ရှင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ ရှင့်အမေအခန်းကို ရှင်းပြီး ကျမအမေခေါ်ထားမို့ အဖော်ရအောင်လို့”
“အော် မင်းက ငါ့အမေကြတော့ အိမ်မှာမထားချင်ဘူး မင်းအမေကြတော့ အဖော်ရအောင်လို့ ဟုတိလား တောက်…မင်းကွာ ဒီမှာငါ့အမေပစ္စည်းကို မင်းလက်ဖျားနဲ့တောင် မတို့နဲ့တော့ အခုနေတာ မင်းအိမ်မဟုတ်ဘူး ငါ့အမေအိမ် မင်းမကျေနပ်ရင် ဆင်းသွားးးးးး ဆင်းသွားးးးး”
အမေခန်းထဲကို ဝင်ပြီးကြည့်တော့ အခန်းထောင့်တစ်နေရာလေးမှာ ညဆိုရင် အမေလိမ်းနေကြ ဆေးဗူးလေးကိုတွေ့ရတယ်
အမေက ဒီဆေးမလိမ်းရင် ညညဆို အိပ်မရဘူး အမေအိပ်မပျော်ပဲ နေမှာလိမ့်မယ် ငါအမေဆီကိုသွားပို့ ရမယ်အခုပဲသွားမယ် ကျွန်တော်အမေဆီကို အပြေးရောက်ခဲ့တယ်
ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ အမေမှာမအိပ်သေးပဲ ခုံတစ်လုံးမှာထိုင်ပြီး ထမင်းစားအရေးကို ထမင်းရှင်တွေကို ဆုတောင်းပေးနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်
အမေကျွန်တော်ကို မြင်တော့ မျက်ရည်တွေကို အမြန်သုတ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်……
ကျွန်တော်လဲ ဆေးဗူးလေးကို အမေ့လက်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်
“သားရယ်ဆေးဗူးမေ့နေတာများ ပင်ပန်းခံပြီး လာပေးနေရလားသားရယ် မနက်မှ လာပေးလဲရတာပါပဲ ညဘက်ကားမောင်းတာ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး အမေ့သားလေး တစ်ခုခုဖြစ်မှာ စိုးရိမ်မိတယ်သားရယ်””
“သားဆေးဘူး လာပို့တာမဟုတ်ဘူးမေမေ မေမေကိုသားလာခေါ်တာ သားမှားခဲ့တာတွေကို သားတောင်းပန်ပါတယ် မေမေရယ် ”
“သားရယ်မေမေက သားကိုဘယ်တော့မှ အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး သားကိုချစ်လွန်းလို့ မေမေအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ တောင်မှလူလောကထဲကို ခေါ်လာခဲ့ပြီပဲ တခြားအကြောင်းအရာတွေ ပြောစရာလိုသေးလို့လားသားရယ်”
အမေ့မှာ ကျွန်တော်ပါးပြင်ပေါ်က မျက်ရည်တွေကိုသုပ်ပေးရင်း ကျွန်တော်တို့သားအမိနှစ်ယောက် အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်………
မိဘဆိုတာက သားသမီး ဘယ်လောက်များများ
သားသမီးတွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုကြ ခါးမလှချင်နေပါစေ
သားသမီးတှေ ဆီက စားရတဲ့ ထမငျးတလုတျ နှငျ့ မိဘတှရေဲ့ဘဝ
ညနအေလုပျကအပွနျ အိမျကိုရောကျတာနဲ့ အမနေဲ့ဇနီးသညျပွောနတေဲ့ စကားတှကေိုကွားနရေတယျ…
မိနျးမဖွဈသူရဲ့စကားကိုကွားလိုကျရတဲ့ ကြှနျတျော ဒေါသတှဖွေဈမိတယျ
“မငျးကလဲကှာ အမမှော ဒီဟငျးတှနေဲ့ မတညျ့ပါဘူး မစားနဲ့လို့ ဒေါကျတာက မှာထားတယျလေ ဒီလောကျတော့ မငျးနားလညျရမှာပေါ့”
“ဒီလောကျစားခငျြနရေငျ ရှငျ့အမကေို ရှငျကိုယျတိုငျခကျြကြှေးလိုကျ……”
မိနျးမဖွဈသူက မကမြေနပျနဲ့အခနျးထဲဝငျပွီး တံခါးကိုဆောငျ့ပိတျလိုကျတယျ ဝုနျး…
ကြှနျတျောအမဘေကျကို လှညျ့ပွီးအမကေိုကွညျ့လိုကျတော့ အမရေဲ့မကျြဝနျးအိမျမှာ မကျြရညျစတှေ တှဲခိုနတောတှလေို့ကျရတယျ……
“ရပါတယျ မမေရေယျ သားမပငျပနျးပါဘူး မမေကေိုအခုခေါကျဆှဲတဈပှဲ ပွငျပေးမယျနျော ပွီးရငျသားပွောစရာရှိတယျမမေေ သားခေါကျဆှဲပွငျလိုကျမယျနျော”
“ဒီလိုပါ အိမျမှာနရေတာကလဲ အမမှောအဆငျမပွဘေူးလေ ပွီးတော့ သားမိနျးမကလဲ အမကေိုဆိုအမွဲတမျး အပွဈပွောနတော အမလေဲစိတျဆငျးရဲရတယျ ဒီတော့အမအေဆငျပွအေောငျသားစီစဉျထားတယျ”
အမမှေ့ာပွောရငျး မကျြရညျတှကေလြာခဲ့တယျ ငိုနတေဲ့ကွားကနေ မပီသတဲ့ စကားလေးတှနေဲ့အမဆေကျပွောတယျ……
“သားပွောမှာကို အမသေိပါတယျ သားမမေကေို ဘိုးဘှားရိပျသာမှာ ထားခငျြတာမလား မမေသေဘောပေါကျပါတယျ ဒါပမေဲ့သားးးးးရယျ
အမသေ့ားလေးကို အမကေ့အခုခြိနျထိ မကျြစိအောကျက အပြောကျခံခဲ့တာ မဟုတျဘူးအမမှေ့ာ မကျြစိတှမေမွငျနိုငျရငျတောငျမှ အမသေားလေးရဲ့အသံလေးကိုတော့ ကွားခငျြမိတာပေါ့ ဒါပမေဲ့ သားအဆငျပွမေယျဆိုတော့လဲ သားထားတဲ့နရောလေးမှာ အမသှေားနရေမှာပေါ့ သားရယျ”
မမေရေဲ့စကားသံတှကေို နားထောငျရငျး ကြှနျတျောမကျြရညျကခြဲ့မိတယျ
ဒါပမေဲ့ကြှနျတျော ဘာတကျနိုငျတော့မှာလဲ မိနျးမဖွဈသူကလဲ အမကေိုပဲအမွဲတမျး ပွဿနာရှာနတော ဟူးးးးးးး
မထူးတော့ပါဘူးလေ အမကေို့ ဘိုးဘှားရိပျသာမှာပဲ လိုကျပို့တော့မယျ……
“မငိုပါနဲ့တော့အမရေယျ အမအေဆငျပွအေောငျ သားအကောငျးဆုံး လုပျပေးမယျနျော အမကေိုညနကွေရငျ သားလိုကျပို့မယျနျော အမပေစ်စညျးတှေ စုံအောငျထညျ့ထားလိုကျပေါ့ အခုသား ခေါကျဆှဲပွငျလိုကျအုံမယျနျော”
“မလုပျပါနဲ့တော့သားရယျ အမမေစားခငျြတော့ပါဘူး သားလဲသှားနားတော့လေ အမလေဲရှိတဲ့ အဝတျစားလေးတှေ ထညျ့ထားလိုကျမယျ…”
အမနေားကနေ ကြှနျတျောထှကျလာပွီး အခနျးပေါကျဝရောကျလို့ အမကေိုလှညျ့ ကွညျ့လိုကျတော့ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ အမကြှေနျတျောကို ကွညျ့နတောကို တှလေို့ကျရတယျ
ခှငျ့လှတျပါ မမေရေယျလို့ စိတျထဲနေ တောငျးပနျမိတယျ
ညနလေဲရောကျရော ကြှနျတျောအခနျးထဲကထှကျလာတော့ အမမှော အဝတျဟောငျးလေး နှဈစုံလောကျကို ရငျခှငျမှာပိုကျပွီး စောငျ့နတောကို တှလေို့ကျရတယျ…
“ထညျ့ပွီးပါပွီသားရယျ အမမှော ဘာမှထူးထူး ထှထှေမေရှိတာ”
အမကေို့ချေါပွီး ဘိုးဘှားရိပျသာကို လိုကျပို့ဖို့ထှကျခဲ့တယျ လမျးတဈလြှောကျမှာလဲ စကားတဈခှနျးမှမပွောခဲ့ကွဘူး အမမှေ့ာတော့ ကြှနျတျောစိတျခမျြးသာအောငျလို့ ရငျထဲမှာဘယျလောကျပဲ စိတျဒုက်ခတှေ မြားနပေါစေ အမမေကျြနှာမှာအပွုံး မပကျြခဲ့ဘူး အမဝေမျးနညျးနမေယျဆိုတာ သားသိပါတယျ အမရေယျ……
အမဖွေဈသူမှာလဲ သားစိတျခမျြးသာဖို့တာ လိုကျလြှောခဲ့ရတာ ရငျထဲမှာတော့ ကွကှေဲနမေိတာပေါ့ သားရယျ
လူတှပွေောပွောနတေဲ့ ဘိုးဘှားရိပျသာဆိုတာ အမတေို့လို လူတှအေတှကျတော့ ဒုက်ခသယျစခနျးတဈခုပေါ့
ဘယျမိဘမှ ကိုခဈြတဲ့ သားသမီးခှဲခှါခငျြတာ မဟုတျပါဘူး ကိုယျမှေးထားတာ သားသမီး ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘိုးဘှားရိပျသာမှာ လာနရေတဲ့ အမတေို့လို လူတှကေို အမသေနားမိတယျသားရယျ
ငါ့သား ငယျငယျလေးတုနျးက အမတေို့ကမြား သားကိုမိဖမဲ့ကြောငျးမှာ ပို့ခဲ့ရငျငါသားလေး ကွီးလာရငျအမတေို့ကို စိတျဆိုးမှာပဲနျော
မိဘရှိရဲ့သားနဲ့သားအရငျးတဈယောကျလုံးကို မိဘမဲ့ကြောငျးမှာ ပဈထား ရလားလို့ သားလေးတှပွေီး စိတျနာနမှောပေါ့ အခုလဲအမတေို့ အဖွဈက အဲလိုပါပဲ
ကိုယျ့အသကျနဲ့ရငျးပွီး မှေးခဲ့ရတဲ့သားသမီးတှေ ရှိပမေဲ့လညျး ဘိုးဘှားရိပျသာ ဆိုတဲ့နရောကို အမသေ့ားလေးက လိုကျပို့ခဲ့တယျနျော အမစေိတျမဆိုးပါဘူး သားရယျ အမသေ့ားလေး စိတျခမျြးသာရငျ အမကေနြေပျပါပွီသားရယျ…
အတှေးကိုယျစီနဲ့ပဲ ဘိုးဘှားရိပျသာထဲသို့ ဝငျလာခဲ့တယျ
အမနေရေမဲ့ အခနျးကိုလိုကျအပို့ ဧညျ့ခနျးကိုဖွတျအလြှောကျ ကွညျ့လိုကျတော့
tvကွညျ့နတေဲ့သူတှရေယျ အားငယျစှာနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့မကျြလုံးတှရေယျ
တဈယောကျမှ ရညျမောပြျောရှငျတာကို မတှရေ့ဘူး အမနေမေဲ့ အခနျးလေးထဲမှာ နရောတကစြီစဉျပေးပွီး ကြှနျတျောပွနျဖို့အတှကျ အမကေို့နူတျဆကျလိုကျတယျ
“အမေ သားသှားတော့မယျနျော အမဘောပဲလိုလို သားဆီကိုအကွောငျးကွားနျော သားလဲ မကွာခဏလာပါ့မယျ”
အမကေိုခေါငျးလေးငွိမျ့ပွပွီး ကြှနျတျောထှကျလာခဲ့တယျ အိမျကိုပွနျရောကျတော့ မိနျးမဖွဈသူနဲ့ သူ့အမနေဲ့က ကြှနျတျောအမနေတေဲ့ အခနျးလေးကို အကုနျရှငျးနတေယျ အမပေစ်စညျးမှနျသမြှ အမှိုကျပုံးထဲ ထညျ့နတေယျ
“ဒါကဘာဖွဈတာလဲ ဘာလုပျတာလဲလို့ ငါမေးနတေယျလေ”
“ရှငျမွငျတဲ့အတိုငျးပဲလေ ရှငျ့အမအေခနျးကို ရှငျးပွီး ကမြအမခေျေါထားမို့ အဖျောရအောငျလို့”
“အျော မငျးက ငါ့အမကွေတော့ အိမျမှာမထားခငျြဘူး မငျးအမကွေတော့ အဖျောရအောငျလို့ ဟုတိလား တောကျ…မငျးကှာ ဒီမှာငါ့အမပေစ်စညျးကို မငျးလကျဖြားနဲ့တောငျ မတို့နဲ့တော့ အခုနတော မငျးအိမျမဟုတျဘူး ငါ့အမအေိမျ မငျးမကနြေပျရငျ ဆငျးသှားးးးးး ဆငျးသှားးးးး”
အမခေနျးထဲကို ဝငျပွီးကွညျ့တော့ အခနျးထောငျ့တဈနရောလေးမှာ ညဆိုရငျ အမလေိမျးနကွေ ဆေးဗူးလေးကိုတှရေ့တယျ
အမကေ ဒီဆေးမလိမျးရငျ ညညဆို အိပျမရဘူး အမအေိပျမပြျောပဲ နမှောလိမျ့မယျ ငါအမဆေီကိုသှားပို့ ရမယျအခုပဲသှားမယျ ကြှနျတျောအမဆေီကို အပွေးရောကျခဲ့တယျ
ကြှနျတျောရောကျသှားတော့ အမမှောမအိပျသေးပဲ ခုံတဈလုံးမှာထိုငျပွီး ထမငျးစားအရေးကို ထမငျးရှငျတှကေို ဆုတောငျးပေးနတောကို တှလေို့ကျရတယျ
အမကြှေနျတျောကို မွငျတော့ မကျြရညျတှကေို အမွနျသုတျလိုကျတယျ ပွီးတော့ ကြှနျတျောကိုမေးတယျ……
ကြှနျတျောလဲ ဆေးဗူးလေးကို အမလေ့ကျထဲ ထညျ့လိုကျတယျ
“သားရယျဆေးဗူးမနေ့တောမြား ပငျပနျးခံပွီး လာပေးနရေလားသားရယျ မနကျမှ လာပေးလဲရတာပါပဲ ညဘကျကားမောငျးတာ ကောငျးတာမဟုတျဘူး အမသေ့ားလေး တဈခုခုဖွဈမှာ စိုးရိမျမိတယျသားရယျ””
“သားဆေးဘူး လာပို့တာမဟုတျဘူးမမေေ မမေကေိုသားလာချေါတာ သားမှားခဲ့တာတှကေို သားတောငျးပနျပါတယျ မမေရေယျ ”
“သားရယျမမေကေ သားကိုဘယျတော့မှ အပွဈမတငျခဲ့ပါဘူး သားကိုခဈြလှနျးလို့ မမေအေသကျနဲ့ရငျးပွီးတော့ တောငျမှလူလောကထဲကို ချေါလာခဲ့ပွီပဲ တခွားအကွောငျးအရာတှေ ပွောစရာလိုသေးလို့လားသားရယျ”
အမမှေ့ာ ကြှနျတျောပါးပွငျပျေါက မကျြရညျတှကေိုသုပျပေးရငျး ကြှနျတျောတို့သားအမိနှဈယောကျ အိမျကိုပွနျခဲ့ကွတော့တယျ………
မိဘဆိုတာက သားသမီး ဘယျလောကျမြားမြား
သားသမီးတှေ အမြားကွီးရှိပမေဲ့ မိဘနှဈပါးကိုကွ ခါးမလှခငျြနပေါစေ
ဖခင်အရင်းက သမီးငယ်လေးကို သားမယားကျင့်မှုကို စတင်ဖေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမ ဒေါ်ကြည်ကြည်အေး ပြောပြပါပြီ
Total views : 2424824